RASMI: Weeraryahan Ay Dooneysay Man United Oo Qandaraas SAGAAL Sanno Ah U Saxiixay Kooxdiisa & Lacagta Lagu Burburin Karo Qandaraaskiisa Oo La Kordhiyay - Gool24.Net
RASMI: Weeraryahan Ay Dooneysay Man United Oo Qandaraas SAGAAL Sanno Ah U Saxiixay Kooxdiisa & Lacagta Lagu Burburin Karo Qandaraaskiisa Oo La Kordhiyay
Weeraryahanka kooxda Athletic Bilbao Inaki William oo xagaagan lala xiriirinayay Manchester United ayaa qandaraas cusub oo sagaal sannadood ah u saxiixay kooxda reer Spain taasoo meesha ka saareysa in xiddigaan uu dhawaan ka tagi doono La Liga.
Man United ayaa si weyn loola xiriirinayay Inaki Williams maalmihii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Ingariiska iyadoo loo arkayay inuu noqonayo bedelka Romelu Lukaku kaasoo maalintii Khamiista ku biiray kooxda Inter Milan.
Kooxda Red Devils ayaa ka cagajiideysay inay bixiso lacagta qandaraaskiisa lagu burburin karay waqtigaas oo gaareysa 88 milyan euro, waxaana wadahadalkoodii Athletic Club uu burburay maalintii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga Ingariiska.
SIDOO KALE AKHRISO: RASMI: Eden Hazard Oo Seegaya Kulankiisii Ugu Horeysay Ee La Liga & Dhaawaca Hazard Oo Walwal Ku Ah Zidane
Athletic Bilbao ayaana haatan fariin cad u dirtay iyagoo 25 jirka weerarka ka ciyaara Williams ka saxiixay qandaraas uu kooxda ku sii joogayo ilaa iyo sannadka 2028, waxaana qandaraaskiisa cusub lagu burburin karaa 135 milyan euro ama 125 milyan ginni.
Qandaraaska ayaa ka mid ah kuwii ugu mudada dheeraa ee abid ciyaaryahan loo soo bandhigo, laakiin waxaa rikoorkaas heysta qandaraaskiisa 10ka sannadood ah ee Real Betis ka saxiixday xiddiga garabka ka ciyaarayay ee Brazil Denilson sannadii 1998.
Williams ayaa yiri: “Waxaan rajeynayaa in qandaraaskaan uu ka soo baxo wax weyn sababtoo ah waxaan doonayaa inaan kooxdaan ka dhigo mid ka sii weyn sida ay haatan tahay.
“Halkaan sida aad aragtaan waa gurigeyga, wax walba oo aan rabo halkaan ayaan ku heystaa. Kooxda mar walba waa ay igu qamaareysay, wax walba ayay i siisay. Waxaan dareemayaa inay gurigeyga tahay.”
Williams ayaa kulankiisii ugu horeysay ee Athletic Bilbao saftay sannadii 2014.